46% dadka safarka raaxada ee Bariga Dhexe waxay qorsheynayaan inay dalxiis ugu baxaan dibadda sanadka 2021
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Raaxada » 46% dadka safarka raaxada ee Bariga Dhexe waxay qorsheynayaan inay dalxiis ugu baxaan dibadda sanadka 2021
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Warshadaha Warshadaha • Wararka Raaxada • News • Waajib ah • Dalxiiska • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Falanqeyntii ugu dambeysay ee xogta warshadaha ayaa muujisay in 46% dadka safarka ah ee raaxada ee Bariga Dhexe, ay qorsheynayaan inay si caalami ah ugu safraan marxalad qaar inta lagu jiro 2021.
Baadhitaanka ayaa sidoo kale la weydiiyay isla qaatayaasha haddii ay qorsheynayaan inay qaataan fasax guri ama joogitaan inta lagu jiro 2021 inka badan kala bar (52%) jawaab bixiyaasha ayaa xaqiijiyay inay qaadan doonaan. Intaas waxaa sii dheer, 25% jawaab bixiyaasha waxay qorsheynayeen safar ganacsi, gudaha ama caalamkaba iyadoo 4% jawaab bixiyaasha aysan qorsheyneynin inay u safraan meelkasta sanadka 2021.
Socdaallada raaxada ee Bariga Dhexe ayaa sidoo kale wax laga weydiiyay inta jeer ee socdaalkooda - 31% jawaabeyaasha ayaa sheegay inay qorsheynayeen inay laba jeer safraan 12-ka bilood ee soo socda halka 25% ay xaqiijiyeen inay qorsheynayeen ugu yaraan hal safar oo dibedda ah.
Socdaalayaasha raaxada ee ka imanaya Bariga Dhexe waxay u badan tahay inay la safraan carruurtooda, marka loo eego kuwa ka yimid gobollada kale (40% oo ka soo horjeedda 36%). Markaad kudareyso xaqiiqdaas safarkooda qorshaysan, waxay kadhigeysaa waaxda socdaalka raaxada ee Bariga Dhexe, mid kamid ah kuwa loogu raadinta badan yahay adduunka.
Sida lagu sheegay sahanka, Bariga Dhexe socdaalayaasha raaxada waxay aad u jecel yihiin meelaha quruxda badan ee dabiiciga ah (34%), ciidaha xeebta (34%), cimilada wanaagsan (29%) iyo isku xirnaanta (28%). Sahaminta ayaa sidoo kale daahfurtay in safarrada raaxada ee Bariga Dhexe ay aad uga walaacsan yihiin halista caafimaad ee safarka (43%) iyo nabadgelyada (35%). Si kastaba ha noqotee, mid ka mid ah seddexdii jawaab bixiye ayaa sidoo kale sheegay in qiimaha dhabta ah iyo inuu u taagan yahay qiime wanaagsan oo lacagtu ay wali tahay mid aad muhiim u ah.
Iyada oo tallaalada lagu faafiyo adduunka oo dhan, xirfadlayaasha safarka ee ka shaqeeya qaybta raaxada waxay soo dhaweyn doonaan aragtida sahankan la siiyay, taas oo fursad u siinaysa inay sii horumariyaan istaraatiijiyaddooda suuq-geyn ee gobolka Bariga Dhexe iyo wixii ka baxsan.